ဤခရီး အတော်နီးလှပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ဤခရီး အတော်နီးလှပြီ
Posted by TTNU on Dec 11, 2011 in Buddhism, Creative Writing | 19 comments
ဤခရီး အတော် နီးလှပြီ….
သင့်ဘဝလက်ရှိ အချိန် နှင့် လက်ကျန် အချိန် ကိုကြည့်၍
သံဝေဂ ပွားရန် အချိန်ဇယား (သက်တမ်း ၇၅ နှစ်)
သင့် အသက် …………………… သုံးပြီးသောအသက် …………………. လက်ကျန်ရက်
(၁) ၁၀-နှစ် ……………………… ၃၆၅၀ (ရက်) ………………………၂၃၇၂၅ (ရက်)
(၂) ၁၅-နှစ် ……………………… ၅၄၇၅ (ရက်) ………………………၂၁၉၀၀ (ရက်)
(၃) ၂၀-နှစ် ……………………… ၇၃၀၀ (ရက်) ……………………..၂၀၀၇၅ (ရက်)
(၄) ၂၅-နှစ် ……………………… ၉၁၂၅ (ရက်) ……………………..၁၈၂၅၀ (ရက်)
(၅) ၃၀-နှစ် ……………………… ၁၀၉၅၀ (ရက်) ………………………၁၆၄၂၅ (ရက်)
(၆) ၃၅-နှစ် ……………………… ၁၂၇၇၅ (ရက်) ………………………၁၄၆၀၀ (ရက်)
(၇) ၄၀-နှစ် ……………………… ၁၄၆၀၀ (ရက်) …………………… ၁၂၇၇၅ (ရက်)
(၈) ၄၅-နှစ် ………………………. ၁၆၄၂၅ (ရက်) ………………… ၁၀၉၅၀ (ရက်)
(၉) ၅၀-နှစ် ………………………. ၁၈၂၅၀ (ရက်) ………………………၉၁၂၅ (ရက်)
(၁၀)၅၅-နှစ် …………………….. ၂၀၀၇၅ (ရက်) ………………………၇၃၀၀ (ရက်)
(၁၁)၆၀-နှစ် …………………….. ၂၁၉၀၀ (ရက်) …………………………၅၄၇၅(ရက်)
(၁၂)၆၅-နှစ် …………………….. ၂၃၇၂၅ (ရက်) …………………………၃၆၅၀ (ရက်)
(၁၃)၇၀-နှစ်………………………. ၂၅၅၅၀ (ရက်) ………………………၁၈၂၅(ရက်)
(၁၄)၇၅-နှစ် ……………………… ၂၇၃၇၅ (ရက်) …………………. …………
အထက်ပါ အချိန်ဇယားကို ကြည့်၍ အောက်ပါမေးခွန်းများကို ဖြေကြည့်ပါ။
(၁) သင် …. အခု ဘယ်အရွယ်ရောက်နေပြီလဲ ?
(၂) သင် …. အခု ဘာလုပ်နေသလဲ၊ ဘာလုပ်သင့်သလဲ ?
(၃) သင် …. ဘဝ အတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလဲ ?
(၄) သင် …. ဘဝအတွက် လက်ကျန် အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိအောင် ဘယ်လို အသုံးချမလဲ ?
(၅) သင် …. ဘယ်နေ့၊ ဘယ်ရက်၊ ဘယ်အသက်မှာ၊ ဘယ်ရောဂါနှိပ်စက်ခံရပြီး၊
ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်ဒေသမှာ၊ ဘဝနိဂုံးချုပ်လို့၊ ဘယ်သုသာန်မှာ မြှုပ်နှံ သင်္ဂြိုလ်ခံရမယ်ဆိုတာ၊
မရေရာတဲ့ သင့်ဘဝအတွက် ဘဝအာမခံချက်တွေ ရရှိပြီးပြီလား ?
သင် လူ့ပြည်မှ ထွက်ခွာဖို့ အချိန်နီးလာပြီ။ တရားမမေ့ပါနှင့်။
(ဦးနန္ဒောဘာသ-မိုးကုတ်ဝိပဿနာ မင်္ဂလာရိပ်သာ၊ ပြင်ဦးလွင်) ၏ တရားစခန်းဓမ္မဒါန
ရှင်သေမင်းကို ဘယ်သူမဆို ရင်ဆိုင်ရမယ်။ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ကြမလဲဆိုတာ
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လက်ခံမှုတွေ ကွာခြားကြပါတယ်။
ဥပမာ…မျှော်လင့်ထား၏ မထား၏ အသင့်ဖြစ်၏မဖြစ်၏ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကိုပေါက်ရေးတဲ့ ပို့စ်လေးမှာ
ကိုယ်တို့ ဂဇက်မိတ်ဆွေတွေ သေခြင်းတရားအပေါ် ထားရှိတဲ့ သဘောထား အသီးသီး တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
မမ ပြောတာလေးကတော့ စောသေးတယ်တို့ နောက်ကျနေပြီတို့ ပြောနေမှာထက်
လက်ရှိအချိန်သည်သာ အကောင်းဆုံးပါတဲ့။ မမ ရဲ့  ပစ္စုပ္ပန်ကိုတည့်တည့်ရှု့ မဲ့ဝါဒ
လေးကို ကိုယ်လက်ခံတယ်။ ကိုယ်တို့တွေ အတတ်ကိုတမ်းတ၊ ပစ္စုပ္ပန်ကို အားမရ၊
အနာဂတ်ကို ကြောင့်ကျနေလို့ မဖြစ်သေးဘူး။
ဒေါ်အေးကေကေ ပြောတာကတော့ မသာတစ်ခေါက်ကျောင်းဆယ်ခေါက်
အကြောင်းရင်းဆိုတဲ့အကြောင်း လေးတွေနဲ့ သံဝေဂနဲ့ သံယောဇဉ် လွန်ဆွဲပွဲ
ကျင်းပနေပါတယ်။ လူတိုင်းဒီလိုပါပဲလေ။ လက်လွှတ်လိုက်ဖို့ အားလုံး ခက်ပါတယ်။
ကိုပေါက် ရဲ့  မူဝါဒလေးကတော့
အမှန်အတိုင်းပြောရင် သူ့ဇောနဲ့သူ မနက်အစောအိပ်ယာထ လမ်းလျှောက်ချိန်ကနေ
အင်တာနက်ဆိုင်မှာလာထိုင်တဲ့ ကျနော့်စကက်ဂျူးထဲမှာ အများသူငါလို
တကယ့်ကို တရားဓမ္မတွေမပါ ပါဘူးတဲ့၊ ငါသေရင်ဆိုတာလည်း ထည့်မစဥ်းစားခဲ့မိဘဲ
ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာ လုပ်သင့်တယ်ထင်တာလေးတွေလုပ်ဖို့ အလုပ်ကို
တန်းစီနေတာဖြစ်ကြောင်း၊ အခုမှ ကိုယ့်ကို ကိုယ်ပြန်မေးကြည့်မိတဲ့သဘောဖြစ်ကြောင်း
ဆိုပါတယ်။ သူလည်း ရက်တွေနာရီတွေ မတွက်ဘဲ လက်ရှိ အချိန်လေးကို တန်ဖိုးရှိ
အောင် အားထုတ်နေသူမို့ လေးစားရပါတယ်။
အော် ET ကတော့ လက်တွေ့ဆရာလေးထင်ပါရဲ့  သေရမှာတော့ မကြောက်ပါဘူး။
မသေမရှင် ဖြစ်နေမှာကို ကြောက်တာတဲ့၊ သေပြီးသွားရင် ယောင်လည်လည်
ဖြစ်နေရင်လည်း ဒုက္ခကို (အဲဒီအပိုင်းကို) သူ့ခမျာကြုံဖူးတာ မဟုတ်တော့
နည်းနည်းစိုးရိမ်မိတယ်တဲ့။ ဆိုတော့ ET လေးရဲ့  ရှင်သေမင်း အပေါ်ထားရှိသော
မူဝါဒလေးထဲမှာ ကြောင့်ကျမှုလေးတွေ အရောင်ပြနေလေရဲ့ ။
အုပ်ချုပ်သူ ခိုင်ရဲ့  မှာတမ်းကို အရသာ ပျက်မှာစိုးလို့ ကော်ပီပြလိုက်ပါတယ်။
ဘုန်းလည်းမကြီးဘူး.. (မြန်မာတွေအထက်မှာ.. အ၀ါနဲ့အစိမ်း..အထက်အတန်းအစားကြီး
၂ခုရှိနေတာကိုး..ကိုယ့်ထက်ကြီးတယ်လို့.. သူတို့ပဲ ပြောတာပဲလေ…ဘုန်း..ဘုန်း)
အသက်လည်းမရှည်ဘူး..။ (ကမ္ဘာတန်းမှာ.. နိုင်ငံ၁၉၁နိုင်ငံစီထားတာ.. မြန်မာက..
ရှေ့ကတွက်ရင် ၁၄၁ ..နောက်ကတွက်ရင်မဆိုးဘူး… ၅၀ ရတယ်..။)
အထက်တန်းစားလူတန်းစားရဲ့ အကျိုးတွေကို မျှဝေခံစားမလား.. တွေးဖို့ပဲ…။)တဲ့။
တွေးပါတယ်။ တွေးကြည့်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးဖို့ အသက်ရှည်ဖို့ အထက်တန်းစားဖြစ်မှလားခိုင်ရေ လို့
မေးမိသလို ဖြစ်ရင်ကောင်းမလားလို့လည်း လူစိတ်နှစ်ခွ လေး ဟိုလိုလိုဒီလိုလို အတွေးဝေတေတေလေး
ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ်ဘာမှ မလုပ်နှိုင်တဲ့ဘဝ။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ် အ ထက်က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချိန်ဇယားလေးကိုနေ့တိုင်းဖတ်မိတယ်၊
ဖတ်တိုင်း အချိန်မရှိတော့ဘူးဆိုတာ စဉ်းစားမိတယ်။ စဉ်းစားမိတိုင်း ရေရာတဲ့
ဘဝဖြစ်အောင် သေရွာပါသွားမဲ့ အာမခံချက်လေးတွေ အားထုတ်မိတယ်။
ငယ်ငယ်ကြီးကြီး မိတ်ဆွေတို့လည်း အသေမဦးမီ အသိဦးစေချင်လို့
ပျော်စရာမကောင်းပေမဲ့ စေတနာကောင်းလေးနဲ့ ဒီ ပို့စ် လေးတင်လိုက်ပါတယ်နော်။
Sorry ပါ။ ရိုက်တုန်းက ဇယားအတည့်ပါ။ အခုလက်ကျန်ရက်ကအောက်ရောက်သွားတော့
ပုံစံမကျတာခွင့်လွှတ်ကြပါ။ ပြန်လည်းမပြင်တတ်တော့ပါ။ :?
နေလည်းနေချင်သေးပါတယ်…(တဏှာ မစွန့်နိုင်ဘူးဗျ …)
နေရသခိုက် နောက်ဘ၀အတွက် ရိက္ခာ သယ်ချင်ပါတယ်…(ကုသိုလ်+ ဘာဝနာ ပြောပါတယ်..)
လောဘ(ပညာ လို့ ကျွန်ုပ်တို့ သတ်မှတ်အပ်သော သညာများနှင့် ဒုတိယဘုရားသခင် ကို ရှာဖွေခြင်း…)
မောဟ(မသိလိုက်ခြင်း မြောက်များစွာ ..အချိန်အခါအရ အခြေအနေအရ …နေရာအနေအထားအရ ..
အရ …အရ. ….. auto response ပေါင်းမြောက်များစွာ…)
ဒေါသ(ပညတ် သဘောအရ ဖန်တီးတည်ဆောက်အပ်သော ရာထူး အဆင့်အတန်း လူမျိုး …….စတဲ့
ကွဲပြားမှုပေါင်းမြောက်များစွာအရ …ဆန့်ကျင်ခံထိသော် …မတူညီသည်ရှိသော် …ငါကွ ဟုသော …တလွဲမာန
ကျနော် ငမိုက်သား ဂီဂီမှာ အေးချမ်းမှု အစစ်ကို ရှာဖွေ မတွေ့သေးပါခင်ဗျား..
ဆက်မိုက်ဦးမှာ ဖြစ်ပေမယ့် …..
တီချယ်ကြီးပေးသော အသိ လေးကိုဖြင့် .. .ခကြာခန ..အသိလေးနှင့်ယှဉ်ကာ …
(ဟိုမင်းသားကြီးကို ရိတာ မဟုတ်ပါ … ဂီဂီအတည်ပြောတာဖြစ်ပါသည်…)
ကနဦးစာဖတ်သူတစ်ယောက် အဖြစ် ကြိုဆိုပါတယ်။
မောင်ရင် ဘယ်နှစ်ရက် ကျန်သေးလဲ။
တီချာဆိုရင် ရက် (၅၀၀၀) ကျော်လေး အုပ်စုထဲမှာပေါ့။
တိုများဗုဒ္ဓဘာသာ အယူအဆ အရ ဇာတိ ဇရာ မရဏ ပြီးလို့ ဆက်လမ်းရှိရင်
ဘဝထပ်ရဦးမယ်။ ဒုက္ခ ပြန်ရဦးမယ် လို့ ။ မသေတတ်ရင် သံသရာကြီးထဲမှာ ဒီထက်နိမ့်တဲ့
ဘုံဘဝတစ်ခုခု ကို လားရာဂတိ မဖြစ်အောင်အားထုတ်ရမယ်…စသဖြင့် ရှိပေတာကိုး။
( အကယ်၍ နားမလည်ဘူး ဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေများရှိခဲ့ရင် … ဘာသာရေးဖြစ်နေ၍ ကျမ ဘာမှ
တုန့်ပြန် ငြင်းမည်မဟုတ်ပါ)။ (စကားချပ်) ။
ဆိုတော့ မောင်ဂီရယ်…မောင်ရင် ပြောသလို ပုထုဇဉ်ဖြစ်ကြတာမို့ တဏှာ၊ မာန၊ ဒိဌိ ၊ ရှိမှာမလွဲပါ။
လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ရှိတာ ဘာ ပြောကောင်းမလဲ။ မရှိဘူးပြောတဲ့ သူတွေ ညာနေတာပါ။
သို့သော် ပပဉ္စတရားတွေဖြစ်တဲ့(သံသရာချဲ့ တတ်တဲ့တရား) ဒီ တဏှာ၊ မာန၊ ဒိဌိ ၊တို့ကို ခန္ဓာနောက်က
မလိုက်စေနဲ့လို့ ဘုရားက သိကြားမင်းကိုဟောခဲ့တယ်။ ဒီတော့ သိကြားမင်းက မလိုက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဘုရားလို့ လျှောက်တော့ ” ခယဝယ မြင်အောင်ရှု” လို့ မိန့်သတဲ့။
( ခယ= ခန္ဓာပေါ်မှာ ကုန်တာ။ ဝယ= ခန္ဓာပေါ်မှာပျောက်တာ )
To sum up; ဖြစ် ပျက်မြင်အောင်ရှု ပေါ့ကွယ်။ ဒါလည်း အတော်ကျင့်ရမဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်လား။
“ကျနော် ငမိုက်သား ဂီဂီမှာ အေးချမ်းမှု အစစ်ကို ရှာဖွေ မတွေ့သေးပါခင်ဗျား.. ဆက်မိုက်ဦးမှာ”
ဆိုတဲ့ မောင်ဂီရေ… ကာလာမ သုတ္တာန်ရဲ့  အနှစ်ချုပ်လေးကိုသာ လက်ကိုင်ထားပါသားရေ..
*မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာပွားပါ။ ဥပေက္ခာထားပါ၊ သေချာတာလုပ်ပါ။ အခုကောင်းရင် ၊ အခုဘဝ
ဒီလို အတွေးလေးရှိလိုက်ရင် ဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်၊ Pagan or Atheist or whatsoever:
တစ်မိုးအောက်ထဲ မှာ ရှိတဲ့ လူသားမျိုးနွယ် စိတ်ကလေးနဲ့ လောက ကို အလှဆင်နှိုင်ကြမှာပါ။
အဲဒီအချိန်ဇယားဟာ ၇၅ ကို ယေဘုယျသဘောနဲ့အခြေခံထားပေမဲ့
လက်ကျန်ရက် ဟာ မနက်ဖန် တရက်ပဲ ကျန်တော့တာ မျိုးဖြစ်နိုင် တယ်ဆိုတာကို
သိထားဖို့ လည်းအရေးကြီးကြောင်း စဉ်းစားမိပါတယ်ခင်ဗျာ။
အိပ်ပျော်နေသူများကို နှိုးပေးတဲ့ဆရာမကြီးရဲ့စေတနာကို လေးစားပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်ကတော့ ၁၇၅၂၀ ရက် ကျန်ပါသေးတယ်။ ၇၅ နှစ်ဆိုတော့ တုန်ချည့်တုန်ချည့် ဖြစ်နေပြီလား မသိဘူးနော် တီချယ်ကြီး။ အဲဒီ အချိန်ဆို ကုတင်ပေါ်မှာ သေရမယ့် အချိန်ကို စောင့်ရင်စောင့်နေရမှာ။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီလိုမကြိုက်၊ ဘယ်အရွယ်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားပါသည်ကို ကြိုက်တယ်။ အလုပ်လုပ်ပြီး ပိုက်ပိုက်ရှာနေ ပါတယ်။ ဘဝအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အစီအစဉ်တွေချထားသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ လောလောဆယ် ဒီလိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ အလုပ်၊ မိသားစု၊ အများအတွက် အလှူ၊ ဘုရားအတွက်အလှူ ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်ကြီး ၄ခုခွဲထားပါတယ်။ ရတဲ့လစာကို အချိုးကျ အဲဒီခေါင်းစဉ်တွေအောက်ပို့ ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ အလုပ်နှင့် မိသားစုကို ၈၀% ထည့်ထားပါတယ်။ ၂၀%က အများနှင့် ဘုရားအတွက် လတိုင်းလှူပါတယ်။ ခုတော့ နည်းနည်းပဲလှူနိုင်ပါသေးတယ် အလုပ်အခြေမခိုင်သေးလို့ ပါ။ အသက် ၄၀ လောက်ဆိုရင်တော့ ၅၀-၅၀ ညီအောင်ညှိသွားပြီး အလှူအတန်းနှင့် ဘာသာရေးကို ဦးစားပေးလုပ်သွားမယ်လို့ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ဘဝအာမခံချက်ရှိလားဆိုတော့ ဘဝအာမခံချက် ရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန် သိပ်တော့မကွဲပြားပါဘူး။ အောက်ကဟာက ကျမ်းစာထဲက ပညတ်တော် ၁၀ပါး ထဲက ၅ ချက်ပါ။ ဘာရည်ရွယ်ချက်မှ မရှိပါ။ ဗဟုသုတပါ။
10 “You shall not covet your neighbor’s house; you shall not covet your neighbor’s wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor’s.” (You shall not covet anything that belongs to your neighbor.)
ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါး ဟောတဲ့အထဲမှာ ဒကာ ဒကာမတွေကို တရားစခန်းဝင်ဖို့ တိုက်တွန်းတိုင်း ၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးတွေ အကြောင်းပြပြီး မအားသေးဘူးလို့ ငြင်းကြတယ်တဲ့။
ဘုန်းကြီးတွေကို အကြောင်းပြလို့ရပေမယ့် သေမင်း ခေါ်ရင်တော့ လိုက်သွားကြရတာပဲ တဲ့လေ။ သေမင်းကိုတော့ မအားသေးလို့ ဆိုပြီး အကြောင်းပြလို့မှ မရတာကိုး…
ထီဆယ်ခါ မပေါက်မချင်း အသက်မပျောက်မဲ့..ငပေါက်ဖော်..
မပေါက်မချင်း ပျောက်ပေမဲ့…. ကြောက်ရင်းမြောက်စေတဲ့….. သောက်ကမြင်း အထောက်တော်နဲ့…. ချောက်ရင်း အနောက်ဆော်လိုက်မယ်…..အခြောက်ကွင်းပေါက်ဖော်ရေ…..
သဂျီးကို သွားမဝေဖန်ပါနဲ့ဗျာ။။။။ သူက ကိလေသာကုန်ခမ်းပြီး မခံစားချင်ပေမဲ့ အားပါးတရ မိုးမမြင်လေမမြင် နွားသိုးကြိုးပြတ် သရဲမရဲစီး ဝေသာလီပြည်ဘီလူးဝင်သလို အားနာပါးနာနဲ့ ကာမဂုဏ်အာရုံ ခံစားနေရတဲ့ ဂျာပွန်ဇိမ်ဘုံးဂျီး (ဇင်မဟုတ်ပါ) ဖြစ်နေဘီ။။။။ ရေစက်ချပေးရင်တောင် ကိုဘေးနွားကင်အပေါ်မှာ ဘီယာစက်ချပေးရသဒဲ့။။။။။
ကျွန်မကတော့ ဘယ်နှစ်ရက်ပဲ ကျန်တယ်ဆိုတာမျိုး မတွက်ပါဘူး .. အချိန်မရွေးသေနိုင်တယ်လို့ပဲ မှတ်ယူထားပါတယ် … ဒါပေမယ့် လောဘ ဒေါသ မောဟတွေနဲ့ နပန်းလုံးနေရသေးတာပဲ … တစ်နေ့တစ်နေ့ နဲနိုင်သမျှနဲအောင် အသိဥာဏ်လေးနဲ့ ကြိုးစားနေရင်း သေဖို့အတွက် အဆင်သင့်ပြင်နေပါကြောင်း …….
ဘယ်သူ့ကိုမှ တရားချဖို့စိတ်ကူးမရှိတော့ပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် တရားရဖို့အတွက်သာ စဉ်းစားနေပါတော့တယ် …
(သူကြီးလိုလူမျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့ပြီးမှ ရလာတဲ့ အသိတရားဖြစ်ပါကြောင်း … )
Reply အတွက် ထပ်မံ၍ ကျေးဇူးတင်ခွင့်ပြုပါ တီချယ်ကြီးခင်ဗျား…
ယခု အအေးမိ ဖျားနာနေသဖြင့် ရုံးမတက်နိုင်ဘဲ အိမ်မှာ ဆန်ပြုတ်သောက်နေရတော့
ပိုပြီးတောင် တရားကျမိပါသည်ခင်ဗျား ….
တီချယ်ကြီးက ဆုတ်ကပ်၏သဘောကိုယူ၍ ၇၅နှစ် တမ်းနှင့် တွက်ပြထားသည်ကိုတွေ့ပါသည်ခင်ဗျား…
ဆီ အလွန်စားသော …အချိုသိပ်ကြိုက်သော အငန်နှင့် မလွတ်ကင်းသော
ကျွန်ုပ်တို့ လူမျိုးများ ၏ ဗမာ့ ပျမ်းမျှ သက်တမ်းနှင့် ထောက်ချင့်ရလျင်ဖြင့် …၁၀-၁၅နှစ်ခန့် နှုတ်ရမည်
ကျနော့်မှာ အချိန် သိပ်မကျန်တော့ပါခင်ဗျား ….
ကျနော် ပို ကြိုးစားရဦးမည် …ပိုပြီး အားထုတ်ရဦးမည်…
အဓိပ္ပါယ်ရှိသောလူ ဖြစ်အောင် ပိုမို ကျင့်ကြံရပါဦးမည် ဆိုတာ
သည်marketing model ဂီဂီ ဆွဲသွားတာလေ..
သည်ဒါ့ပုံလား… ဂီဂီ ရိုက်သွားတာလေ ဟု သမိုင်းတွင်ချင်ပါသည်..
၀ိပဿနာ တရားကိုလည်း ကျင့်ကြံပွားများ အားထုတ်ချင်ပါသေးသည်ခင်ဗျား
(ယခုတော့ ဘာမှ မလုပ်ဖြစ်သေးပါ ….)
ငွေနောက်လိုက်ရင်….. ငယ်ရွယ်မှုကို စတေးခံရင်း …. ဘာသာရေးကို လစ်လျူရှုရင်း
ကျနော် ….stuck in the middle …ဖြစ်နေပါသေးသည်…
နဂိုရ်ကတည်းက ကျနော်က ခြေထောက်မှာဗွေရောက်နေသူလေ။
တီချယ်ရေ အနော်ကတော့ ချူချာလွန်းလို့ နောက် ၁၀ နှစ်လောက်နေနိုင်ရင်တောင် အတော်ဟုတ်နေပြီလို့ ပြောရမှာ ..
ပြီးခဲ့တဲ့ လက အဆုတ်ထဲပိုးဝင်တော့ သောက်လိုက်ရတဲ့ဆေးတွေ ထိုးလိုက်ရတဲ့ ဆေး မုန်းနေတာပဲ …
ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိလို့လည်း ရိပ်သာကို နှစ်တိုင်း ၀င်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်
မတော် သေသွားရင် ဘာရယ် မဟုတ် အနည်း အကျဉ်း လောက် သေရွာပါသွားနိုင်အောင်လို့ပါ..
ဘုရားလက်ထက်မှာတောင် ချွတ်မရတဲ့သူတွေ ရှိသေးတာ …ခုခေတ်လူတွေတော့ ပြိုင်မပြောတာ ကောင်းတယ် ….. ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ ကိုယ် သူ့ ဘ၀နဲ့ သူပဲ ထားလိုက်ပါတော့ တီချယ်ရယ်
ကျုပ် က တော့ ပျော်ပျော်နေ သေခဲ ဆိုသလို
ဘဝ ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းလျှက်ပါ ခင်ဗျား
ကြောင်လေး… မှန်တယ် Anytime any moment could be the last day!
ET ရေ.. ပညတ်တော် တွေ တီချာဖတ်ဖူးတယ်။ သိမ်မွေ့မှုတွေ တစ်သားတည်းပဲနော်။
မမရေ.. ဟုတ်တယ်နော် ရှင်သေမင်းက appointment မယူထားလည်းလာမှာပဲ။
ကိုပေါက်ဖော်ရယ်.. ငြင်းလို့မရတဲ့ ကိစ္စကိုနော်။
ကိုကြောင်ကြီးရေ..အဲဒီ ကိုဘေးနွားကင်စားရင် အသက်ရှည်တယ်ဆိုရင် ကောင်းတာပေါ့တော်။
ဘယ်သူ့ကိုမှ တရားချဖို့စိတ်ကူးမရှိတော့ပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် တရားရဖို့အတွက်သာ
မောင်ဂီ ဖျားနေသလား၊သည်marketing model ဂီဂီ ဆွဲသွားတာလေ..
သည်ဒါ့ပုံလား… ဂီဂီ ရိုက်သွားတာလေ ဟု သမိုင်းတွင်ချင်တာလည်းလူသားတွေ
အဆက်ဆက်မှာ အလွန်သဘာဝကျတဲ့ Aspiration ကြီးတစ်ခုမို့ အပြစ်
ခြေထောက်မှာဗွေရောက်နေသူကိုပေါက်ရေ… သွားပါများခရီးရောက်ဆိုတော့ …
သံသရာခရီးရှည် ကြီးထဲမှာလည်း ခရီးဝင်္ကပါ ကို တို့တွေ
Pooch မ ရေ…ဘုရားလက်ထက်မှာတောင် ချွတ်မရတဲ့သူတွေ ရှိသေးတာ ဆိုပေမဲ့
တီချာတို့က မနှိုင်းသာပါ။ ဘလော့ရေးရရုံ တို့ကြည့်တာပါကွယ်။
Big Bang ရေ.. တရားရစရာလမ်းကလေးကို နှလုံးယှဉ်နှိုင်ပါစေကွယ်။
ပျော်ပျော်နေ သေခဲတဲ့၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေတတ်တဲ့
ဆိုတဲ့အသိကိုရရှိလိုက်ပါတယ်..အသိဦးဘို့ပြောပေးလိုက်တဲ့တီတီနုရဲ့စေတနာကိုလည်းလေးစားလိုက်ရပါတယ်..။
ဆရာမကြီး သတိပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
သေရင်ကိုယ့်နောက်ပါမယ့် အလုပ်လေးတွေ လုပ်ဖို့
ရှေ့တိုးရင်း နောက်ဆုတ်သလို ဖြစ်နေတာလေးပဲ ရှိပါတယ်။
ရှေ့  တိုးနှစ်ဆ နောက်ဆုတ် တစ်ဆ ထား
ဤ ခရီး အနည်းငယ်တော့